Ka 22, 2018 admin
Argentina akụ na-aghọ ndị mbụ malitere iji Bitcoin maka ahịa azụmahịa
Taa Argentina si Banco Masventas, na mmekorita ya na Bitex exchange, ghọrọ ndị mbụ akụ iji Bitcoin n'ezie ahịa azụmahịa, kpọmkwem maka cross-ókè-ala ịkwụ ụgwọ.
O yiri ka ọ na-akpa anụ ụlọ akụ na ụwa na-ekwe ka ndị ahịa na-eji Bitcoin dị ka a na ugwo nhọrọ. Dị ka akụ, ahịa pụrụ ugbu a iji Bitex iziga ego karịrị 50 mba dị iche iche na-erughị 24 awa, na a ego nke 3% +VAT.
Poland suspends mkpebi nke-agwụ ike cryptocurrency azụmahịa
The Finance Ministry maka Poland ka a tọhapụrụ a ọhụrụ kwuru banyere mba ụtụ isi iwu.
Ọtụtụ na-atọ ụtọ nke Poland si cryptocurrency ọrụ, na ụtụ isi na trading cryptocurrency e nwa oge weliri dị ka ndị ọchịchị ghọtara otú inapplicable na enweghi uche nke ụtụ isi iwu bu.